Faawundeeshiniin Wiikiimiidiyaa dhaabbata bu'aa hin arganne kan marsariitiiwwan tumsaa, beekumsa bilisaa, kan akka Wikipedia, Wikimedia Commons, fi Wiktionary hojjechiisudha.
Waa'ee keessan Odeeffannoo Dhuunfaa baayyee xiqqaa walitti qabna.
Marsariitiiwwan Wiikiimiidiyaa fayyadamuun, Imaammata kanaaf hayyama kenniteetta.
Sochiin Wiikiimiidiyaa qajeelfama salphaa, garuu humna guddaa qabu irratti kan hundaa’edha: nu keessaa kamiyyuu kophaa keenya hojjechuu kan dandeenyu caalaa waliin hojjechuu dandeenya. Marsariitiiwwan Wiikiimiidiyaa caalaatti itti fayyadaman, nageenya kan qabaniifi faayidaa akka qabaatan gochuuf karaa haaraa yeroo barbaannu odeeffannoo waa’ee fayyadamtoota keenyaa osoo hin walitti qabne, osoo hin qoodin, osoo hin xiinxalin waliin hojjechuu hin dandeenyu.
Gara olii deebi'i
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Privacy_policy/om&oldid=23350051"